Ch 12 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 12 Luke
12:1 Avy eo, toy ny nisy vahoaka be no mijoro tena akaiky izy ireo fa hanitsaka hafa, dia nilaza hoe Izy tamin'ny mpianany: "Mitandrema ianareo, fandrao azon'ny masirasiran'ny Fariseo, izay ny fihatsaram-belatsihy.
12:2 Fa tsy misy nanarona, izay tsy haseho, na inona na inona miafina, izay tsy ho fantatra.
12:3 Fa ny zavatra izay efa teneninareo ao amin'ny maizina dia ho nanambara eo amin'ny mazava. Ary izay nolazainao tao amin'ny efitra fatoriana ny sofina dia hotorina avy amin'ny tampon-trano.
12:4 Ka lazaiko aminareo, ireo namako: Aza matahotra izay mamono ny tena, ary rehefa afaka izany, tsy mihoatra noho izany afaka manao.
12:5 Fa izaho kosa haneho aminao izay tokony hatahotra. Matahotra Izay, rehefa ho efa maty, manana ny fahefana hanary any amin'ny helo. Ka lazaiko aminareo: Matahotra azy.
12:6 Tsy no vidin'ny fody dimy vola madinika roa? Kanefa tsy ny anankiray amin'ireny misy hadinoina eo anatrehan'Andriamanitra.
12:7 Fa na dia ny volon-dohanareo no efa voaisa avokoa. Noho izany, aza matahotra. Ianao fa sarobidy noho ny fody maro ianareo.
12:8 Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Izay rehetra no efa niaiky ahy eo anatrehan'ny olona, ny Zanak'olona dia heken'ny izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra.
12:9 Fa ny olona rehetra izay efa mandà Ahy eo anatrehan'ny olona, dia holavina eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra Andriamanitra.
12:10 Ary izay rehetra miteny manao teny hanohitra ny Zanak'olona, dia hahazo famelan-keloka avy aminy. Fa avy aminy izay no efa niteny ratsy manohitra ny Fanahy Masina, dia tsy hahazo famelan-keloka.
12:11 Ary raha mitondra anareo ho ao amin'ny synagoga, ary ny mpanapaka sy ny manam-pahefana, tsy misafidy ny ho manahy ny fomba na izay hamaly, na ny zavatra mety hoe.
12:12 Fa ny Fanahy Masina no hampianatra anareo, amin'izany ora izany, Inona no lazao. "
12:13 Ary ny olona avy any amin'ny vahoaka nanao taminy, "Mpampianatra, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. "
12:14 Fa hoy izy taminy:, "Man, Izay efa nanome ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo?"
12:15 Dia hoy izy taminy: "Aoka ho malina sy Mitandrema ny rehetra avarice. Ho an'ny fiainan'ny olona iray no tsy hita ao amin'ny habetsahan'ny zavatra izay ananany. "
12:16 Avy eo dia niteny taminy mampiasa fampitahana, nanao hoe:: "Ny tany mahavokatra nisy lehilahy nanan-karena namoaka vokatra.
12:17 Ary izy nihevitra tao am-pony, nanao hoe:: 'Inona no tokony hataoko? Fa Tsy misy toerana intsony hanangona ny vokatra. '
12:18 Ary hoy izy:: 'Izao no hataoko. Dia handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe kokoa ireo. Ary ao anatin 'ireo, Hangoniko ny zavatra rehetra izay efa nitombo ho ahy, ary koa ny fananako.
12:19 Dia hilaza amin'ny fanahiko: Soul, manana fananana maro, voatahiry ho amin'ny taona maro. Mitonia, mihinana, zava-pisotro, ary ho falifaly. '
12:20 Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe:: 'Adala, izany alina dia mitaky ny fanahin'ny anao. Ho an'iza, avy eo, dia ireo zavatra an'i, izay efa voaomana?'
12:21 Dia toy izany no ao aminy izay mihary ho an'ny tenany, ary tsy manan-karena amin'Andriamanitra. "
12:22 Ary hoy izy tamin'ny mpianany: "Ary toy izany koa no lazaiko aminareo: Aza misafidy ny ho manahy ny fiainanao, , dia izay ho fihinanareo, na ny amin'ny tenanareo, , dia izay hotafinareo.
12:23 Aina mihoatra noho ny hanina, ary ny tena noho ny fitafiana.
12:24 Hevero ny goaika. Fa tsy mba mamafy na mijinja; tsy misy trano fitehirizana na fitoeran-javatra ho azy ireo. Kanefa Andriamanitra maitso azy. Mainka ve ianao, raha oharina amin'ny azy ireo?
12:25 Ary iza moa aminareo, ny mieritreritra, no mahay manampy iray hakiho ny tsanganany?
12:26 Noho izany, raha tsy mahavita, amin-javatra toy izany kely, nahoana no manahy ny amin'ny sisa?
12:27 Hevero ny fanirin'ny voninkazo, fomba mitombo. Dia tsy mba hisy asa, na Miahy azy. Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe, tsy dia Solomona, amin'ny voninahiny rehetra, nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny.
12:28 Noho izany, raha izany no fitafiana ny ahitra, izay any an-tsaha anio ka hatsipy any anaty lafaoro rahampitso, mainka ianao, Ry kely finoana?
12:29 Ary noho izany, Tsy mifidy mba hanontany ny amin'ny dia izay hohaninareo, na izay hosotroinareo. Ary aza misafidy ny ho voasandratra.
12:30 Fa ny zavatra rehetra dia nitady 'ny Jentilisa' izao tontolo izao. Ary ny Rainareo mahalala fa efa tokony ho izany zavatra izany.
12:31 Na izany aza tena, katsaho aloha ny fanjakan 'Andriamanitra, sy ny rariny, ary izany rehetra izany dia hanampy ho anareo.
12:32 Aza matahotra, ry ondry vitsy; fa efa sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny fanjakana.
12:33 Amidio izay manana, ka manaova fiantrana. Manao anaty fitoeram-bola ho anareo izay tsy rovitra, ny harena izay tsy mahatratra, any an-danitra, izay tsy misy mpangalatra manatona, ary tsy misy kalalao manimba.
12:34 Fa izay itoeran'ny harenareo, dia any koa ny fonareo.
12:35 Aoka ny valahany fehin, ary aoka ho may jiro ao an-tanana.
12:36 Ary aoka ianareo ho tahaka ny olona miandry ny tompony, raha mody avy amin'ny fampakaram-bady; amin'izay mba, rehefa tonga sy mandondòna, mba hisokatra ho azy avy hatrany.
12:37 Sambatra ny mpanompo izay ny Tompo, rehefa niverina, dia hahita ho mailo. Amen Lazaiko aminareo, izany, dia vao hisikina ny tompony ary asaivo mipetraka hihinana, raha, mitohy amin'ny, hanompo azy.
12:38 Ary raha hiverina amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina, na raha amin'ny fiambenana fahatelo, ary raha hahita azy ireo ho toy izany: dia Sambatra ny mpanompo.
12:39 Ary fantaro izao: fa raha ny raim-pianakaviana nahalala izay ora ny mpangalatra dia tonga, Azo antoka fa hitsangana izy fiambenana, ka tsy namela ny tranony hotamina.
12:40 Hianao koa dia tsy maintsy ho vonona. Fa ny Zanak'olona dia hiverina amin'ny ora izay tsy fantatrareo. "
12:41 Ary hoy Petera taminy:, "Tompo ô, izahay va no ilazanao izany fanoharana izany, na koa ny olona rehetra?"
12:42 Dia hoy ny Tompo:: "Iza araka ny hevitrao no mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina, izay notendren'ny tompony notendren'ny ny fianakaviany, mba hanome azy ireo ny venty ny vary tritika amin'ny fotoana mahamety izany?
12:43 Sambatra izany mpanompo izany raha, ny Tompo rehefa hiverina, izy no hahita azy hanao toy izany!.
12:44 Lazaiko aminareo marina tokoa aminareo, izany, dia vao hotendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra ananany.
12:45 Fa raha mpanompo izany efa nolazaiko tao am-pony, 'Ny Tompo nanao ny hiverina avy hatrany,'Ary raha efa nanomboka hamely ny lehilahy sy vehivavy mpanompony, ary mihinana sy misotro, ary mba ho mamo,
12:46 Ary ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro hiverina izay tsy nanantena, sy amin'ny ora izay tsy fantany. Ary hanavaka azy, dia hametraka ny anjara amin'izany ny mpivadika.
12:47 Fa ilay mpanompo, izay nahalala ny sitrapon 'ny Tompo, ary izay tsy miomana ka tsy hanao zavatra araka ny sitrapony, dia hokapohina imbetsaka ny.
12:48 Nefa izay tsy nahalala, ary izay nanao zavatra amin'ny fomba izay mendrika ny daroka, dia hokapohina vitsy kokoa ny fotoana. Koa dia, ny rehetra izay nomena be, be no hadinina. Ary ny olona izay be no nanankinana, kokoa ho nanontany.
12:49 Efa tonga hanipy afo etỳ ambonin'ny tany. Ary inona no tokony iriko, afa-tsy mba ho hirehitra?
12:50 Ary manana batisa, izay aho mba hatao batisa. Ary ahoana no tery aho, na dia mandra mety ho tanteraka!
12:51 Heverinao ve fa efa tonga hanome fihavanana eto an-tany? Tsy misy, Teneniko anao, fa ny fisarahana.
12:52 Fa hatramin 'izao fotoana amin'ny, dia hisy dimy ao an-trano iray: mizarazara toy ny telo hanohitra ny roa, ary toy ny roa hanohitra ny telo.
12:53 Ny ray dia miady an-trano ny zanaka, ary ny zanakalahy hanohitra ny rainy; ny reny hanohitra ny zananivavy, ary ny zanakavavy hanohitra ny reniny; ny reny-in-lalàna hanohitra ny zanany vavy-in-lalàna, ary ny zanakavavy-in-lalàna amin'ny reniny-in-lalàna. "
12:54 Ary hoy koa izy tamin'ny vahoaka: "Raha mahita rahona miposaka avy milentika ny masoandro, avy hatrany ianao hoe:, 'Misy rahona ranonorana ho avy.' Ary dia toy izany no.
12:55 Ary raha avy any atsimo ny rivotra mitsoka, hoy ianao:, 'Ho mafana.' Ary dia toy izany no.
12:56 Ry mpihatsaravelatsihy! Anao hamantatra ny tarehin'ny lanitra, sy ny tany, nefa ahoana moa no tsy ahaizanareo mamantatra izao andro?
12:57 Ary nahoana ianao no tsy, na dia eo aminareo, hitsara izay fotsiny?
12:58 Noho izany, raha ianao no mandeha amin'ny manana ady ho any amin'ny mpitondra, fa aoka ianareo eny an-dalana, miezaka mba ho afaka avy aminy, fandrao mba hitarika anareo ho any amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara hanolotra anao mety amin'ny mpamatotra, ary ny mpiandraikitra dia afaka mandroaka anareo any am-ponja.
12:59 Teneniko anao, ianao, dia tsy hiala avy teo, mandra-pandoanao ny farany indrindra vola. "